DAAWO VIDEO:Madaxweyne Farmaajo oo Weeraray Puntland Iyo Jubbaland “Waxaa nasiib darro in dad gaar ay si qaldan u fahmeen nidaamka Federaalka. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Madaxweyne Farmaajo oo Weeraray Puntland Iyo Jubbaland “Waxaa nasiib darro in dad gaar ay si qaldan u fahmeen nidaamka Federaalka.
DAAWO VIDEO:Madaxweyne Farmaajo oo Weeraray Puntland Iyo Jubbaland “Waxaa nasiib darro in dad gaar ay si qaldan u fahmeen nidaamka Federaalka.
October 9, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 7
Madaxweynaha Soomaaliya Ayaa Si Adag Uga Hadlay Maamulada Siyaasadooda Iyo Dowlada faderalka Sababta Ay isku Fahmi la Yahiin Inta Badan,Wuxuuna eedayn Ujeediyey Mamaul Goboleedyada.
Madaxweyne Farmaajo “Waxaa nasiib darro in dad gaar ay si qaldan u fahmeen nidaamka Federaalka, nidaamka Federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, laakiin dowlad goboleedyada ma siineyso madax banaani gaar ah, waxaa idin xusuusinayaa in ilaalinta Qaranimada Madaxbannaanidiisa ay saaran tahay dowladda Federaalka”
Halkani Hoose Ka Daawo Video
DAAWO VIDEO:Odaaysha Caare oo Muuse Biixi Cabdi Waji Xumo Kala Kulmay mar kale ,Caare oo dagaalkiisi Soo celinaya
DAAWO VIDEO:Buuhoodle Deeq La Gaadhsiiyey Dhalinyaro Ciyaartoy Qaali Ah Gobolka.
Waxaa aaminsanahay in nadaamka federaalku qaybo badan u kala qaybsamo oo dhibtu tahay inaan kan Soomaaliya ka shaqeyn kara la isku waafaqin. Haddee arin kasta dadkuu ka dhexeeyo waa ka wada xaajoodaa oo isla gorfeeyaa ee maxaa madaxdeena ka khaldan oo saas u diiday inay xal ku keenaan? Sow maahan danta guud waxa muhiimadu tahay iyo in dawlad tayo leh la helo ileyn meeshan danooyin gaar ah la isku ma haystee? War anagaa wax aragnay.
Dab La Ridey says:
Federal Hawiye Aaminsanyahay waa
” Kaagana aniga kula leh Kaygana aniga iska leh ”’
Bal Hadda u fiirso Lacagta Deeqda ah ee somaliya soo gasha ma soo dhaafto Muuqa-disho iyo agagaarkeeda. Haddi la yiraahdo Dahab ama petrol aya laga helay puntland ama jubaland waxa la oranaya waa in 50% Muuqa-disho la siiyaa.
Haddi la yiraahdo mashruuc baa la dhisaya oo Japan aya noogu deeqday waxa la oranaya Xamar aya laga dhisaya mashruucaas.
Federal noocaas ah waxaan leeyahay aniga ma shaqayn karo………..
@ Caaqil Fanax
Salaan Sharaf Boowe ayaan hawada sare kuu soo marinaya.
Caaqil waan ogahay waana la socda xaaladda Puntland.
Reer Tolkay Maxamud Saleebaan waa niman fiican laakin hal dhibaato ah bay leeyihiin waa ”’ MACAAN JECEL ”’
intaasu waa iga kaftan !
Suldaan waa kaa qaaday salaan sharafta waana ku mahadsan tahay. Boowe intaas aad MS ka sheegtay walleysan been ahayn oo waa is wada ognahay hahaha. MJ haddaan nahay cudurka xukun jeceylka waa nala ku xantaa waana na hayaa marka beenta la iska ilaaliyo. Mar ay ahaato ba waxaan ku kalsoonahay in reerku iska xoqi doono cambaartan cirka ka muuqata oo mana foga wakhtigaasu. Kuwa hadda soo kacaaya oo dunida la dhaqmay baa isbedelkaas keenaya mar aan fogayn. Si kastaba Warosku waa ka koreeyaan kursi xun oo madaxweyne maamul goboleed ah suldaan.
Kkkkk Fanax iyo Dab La Ridey waan idin salaamay labadiinaba.
Dab La Ridey
Kaftanka adiga iyo Fanax idin dhexmarey markaan dheehday waxbaa iiga soo dhex baxey. Horta ninkaan xeerin wixii tegey, casharna ka baran, waxa soo socdana ma arki karo, waxa joogana hadalkeedaba daa.
Fanax waxa uu kugu yidhi, ‘Boowe, Aar Gacaliye Macaanka inuu nagu dhacey waa lanagu xantaa.’ Kkk ‘Waana dhab ayuu sii dabo dhigey.’ Aar ragu hadalka kala odhan oge, ‘waa lanagu xantaada’ uu ka horeysiiyay xaqiiqada uu qirtey walee in badan oon dhugan karin hadalkaasi wey ku hafan doonaan. Mahadhada ka hadheysa ee uu saderkaas ka tegey ayaa noqoneysa, ‘waa lanagu xantaa.’ Kkkkk
Hadana wuxuu kugu beer laxowsadey, ‘Aar Boowoow, aniga iyo generation kayaga macaan baa na haleeyay oo halistuu nagu hayaaye, yaryarka aynu dhalnay ama jiilka naga danbeeya ayaa sixi doona khaladkaas’. Kkkkkk
Adiga wuu kaa saxeexdey oo xukun meeshaas ka qaban meysid.
Hadaba inankiisu wuxuu inankaaga ku odhan doono halkaas makaaga yara bidhaantey?
Maxey kale dee, Kubada wuu sii laagi doonaa uun. Kkkkkkkk
ileyn shaakadda na dhex martay aniga iyo caaqil fanax waad nala socotay, war Ahmedow caadi maba tihid sxb .
Caaqil Fanax waa nin wanaagsan oo garna gasho kana baxdo waana Rag caadadiis waana taageeraya ragga somaliyeed ee xaqiiqda aan ka leexleexan oo runta sheega sida Caaqil fanax
Ahmedow Anigu reerkaan ka dhashay wale wakhti uma hayaan Kursi iyo xil sdhibaato wata sababtaas baanu uga nabad galnay wixi wadanka ka dhacay oo meel walba magac iyo maamuus uga leenahay.